Cities Best In Europe Waayo Suuqa By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Cities Best In Europe Waayo Suuqa By tareenka
waayo-aragnimada New waa sabab wanaagsan u safraya. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar dalxiis-friendly hortiisa ah ma qaban kartaa shumac in batay shopping ah, iyadoo aan loo eegayn sida cajiib ah. Dadka u ciqaabayn shopping waxan u garan, oo waxaa nasiib wanaag badan oo magaalooyinka Yurub, halkaas oo ay oodda karaa rabitaanka qarashyada.
Si kastaba ha ahaatee, si ay u leeyihiin lacag ka badan iyo tamarta tagay shopping, waa fikrad wanaagsan inaad safri cheap laakiin si degdeg ah. Helitaanka in magaalooyinka ugu fiican Yurub adeeganayay tareen labada xaaladaha kuwa buuxiyo. Aynu eegno at qaar ka mid ah geyneysa weyn ee shopping iyo sida aad halkaas ka heli kartaa tareen:
Adeeganayay ee Amsterdam, Netherlands
Amsterdam waxaa loo yaqaan waayo, wax badan oo, iyo xarumaha wax laga gato ay yihiin mid ka mid ah. Magaaladu waxay bixisaa kala duwan oo badan oo hawlaha ganacsiga iyo noocyada, ku xiran tahay sida weyn miisaaniyada waa. Haddii aad raadineyso weeyna qaar ka mid ah ku yaalada, ah P.C. Hoofstraat waa jidka kuu. Waayo, dukaamada iyo xarumaha wax laga gato, aad ku dhuftey laga yaabaa De Bijenkorf, Magna Plaza ama Kalvertoren.
De Negen Straatjes ama Waddooyinka Sagaal ayaa sidoo kale weyn dukaameeysatada haddii aad rabto in aad la kulanto dukaamada iyo Hababka badan oo kala duwan hal mar. Waxaad gaari karo Amsterdam tareen si fudud laga saaray magaalooyin waaweyn oo Yurub ah ugu, oo ay ku jiraan Paris iyo Copenhagen.
Adeeganayay in Milan, Italy waa Fashion qaado for Best Magaalooyinka Yurub Shopping
Milan waxaa lagu tiriyaa ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub mahad shopping in la tixgeliyo caasimada fashion. Si kastaba ha ahaatee, Milan ma aha oo kaliya ku saabsan Fashion The iyo fashion-jidadka sare ee degaanka Duomo ah. Waxaa jira meelo kale oo badan si ay u sahamiyaan, ka dukaamo artsy degmada Brera u saamayn funky degaanka Navigli ah. Milan runtii waa Jannada dukaan ah. Haddii aad soo jiitay waxa by, waxaad u safri kartaa Milan si fudud tareen Rome ka, Venice, iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Europe.
shoppers khibrad jecel Zurich, gaar ahaan kuwa ka dhigi kartaa sida ugu fiican ee dukaamada ugu qaalisan. Zurich waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub adeeganayay sababta oo ah waxa uu dareensan yahay in uu ka duwan yahay metropolises ugu. Sihlcity xarun laga dukaamaysto iyo Westgate Glatt ma yihiin suuqyada weyn aad u badan tahay in loo isticmaalaa in lagu, laakiin waxay bixiyaan tafaariiqda tayo leh waayo-aragnimo.
goobaha kale ee caanka ah waxaa ka mid ah Bahnhofstrasse ah, Europaallee iyo degaanka ku hareereysan Langstrasse, gaar ahaan haddii aad rabto in aad hubi Swiss iyo design magaalooyinka. Helitaanka waxaa tareen waa u fududahay ka Berlin, Munich, Vienna, iyo magaalooyinka kale ee Yurub.
Geneva in Zurich tareenkas
Berlin, Germany ayaa sidoo kale ka mid ah Best Magaalooyinka Yurub Shopping
Berlin xaq horyaalka ee mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub adeeganayay degmooyinka ay weyn tafaariiqda halkaas oo aad ka heli karto shiidaa wax. Waayo, kuwa jeebka qoto dheer, Kurfurstendamm ama "Ku'damm" waa waajib-booqasho, halka kuwa miisaaniyad la adkeeyo shaki la'aan doono raaxaystaan ​​safar si Tauentzienstrase ah. Sida caan ah caga Yurub iyo magaalada weyn, Berlin waa si fudud Ieexdo tareen magaalooyinka kale oo badan oo Europe.
Munich in ay Tareenadu Berlin
Mid ka mid ah waxyaalaha ka dhigi Antwerp gaar ah shopping-caqliga leh waa ay degmada diamond caansan dunida ee. Si kastaba ha ahaatee, Antwerp uusan haysan ma naqshadeeye iyo dukaamo guridda, dukaamada qaraami ah ama nool suuqyada labada. Waxay ku siin karaan waayo-aragnimo u gaar ah in dhammaan dadka dukaameeysanaya, xataa kuwa ay adag tahay in ay ka farxiyaan. Waxaad gaari karo Antwerp tareen ka Berlin, Paris, iyo magaalooyinka kale ee Europe.
Diyaar ma u tahay qaar ka mid ah shopping weyn ee qaar ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub? Qorsheyso guura, iyo jartaan tikidhka tareenka aad hore!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cities-europe-shopping-train/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ee si / de ama / ru iyo luuqado badan.
#traveleurope europetravel shopping tareenada